सेलिब्रेटी डेस्टिनेसन बाली, कसरी र कति खर्चमा जाने ? - ParyatanBazar.com
सेलिब्रेटी डेस्टिनेसन बाली, कसरी र कति खर्चमा जाने ?
पर्यटन बजार१३ कार्तिक २०७८, शनिबार मा प्रकाशित
कात्तिक १३,काठमाडौं । सेलिब्रेटी नाम नै काफी छ। सेलिब्रेटी आम मानिसको आकर्षणको केन्द्रमा पर्ने गर्छन्। उनीहरूका हरेक गतिविधिलाई पनि समाजले कुनै न कुनै प्रकारले नियालिरहेको हुन्छ। आम मानिसमा सेलिब्रेटीहरूको बारेमा धेरै प्रकारको जिज्ञासा रहने गर्छ। धेरैले त सेलिब्रेटी भन्ने बित्तिकै आम मानिसभन्दा भिन्न हुने ठान्छन्। समाजले पनि सेलिब्रेटीलाई विशेष दर्जाको नागरिकको रूपमा व्यवहार गर्छ।
प्रायजसो सेलिब्रेटी भन्ने बित्तिकै हामी चलचित्रका कलाकार , गायक , गायिका , कमेडियन ,आदि भन्ने बुझ्छौँ। अहिले सेलिब्रेटीको दायरा बढ्दो छ किन कि हिरो हिरोइन मात्र नभएर खेलाडी र सेफले पनि राम्रै स्थान पाउन थालेका छन्। सेलिब्रेटीले लगाएका लुगा , उनीहरूले खाने खाना , उनीहरू बस्ने होटेल , र उनीहरू घुम्न जाने स्थान यी सबै चिजहरू सर्वसाधारणको चासोको विषय बन्ने गर्दछन्। सेलिब्रेटीले प्रयोग गरेका धेरै सामग्रीको फलो गर्ने चलन पनि छ , त्यसैले नै उनीहरूको प्रयोग आजभोलि दैनिक प्रयोगमा आउने खाद्यान्नका सामान , नयाँ ब्रान्डको लुगा , जुत्ताचप्पल ,बैङ्किङ क्षेत्र ,एजुकेसन कन्सल्टेन्सी र सौन्दर्यका प्रोडक्टमा समेत सेलिब्रेटीलाई एम्बेसडर बनाएर प्रचारप्रसार गर्ने गरिन्छ।
सोहीअनुसार पछिल्लो समय सेलिब्रेटीले घुम्ने स्थान आम मानिसको रोजाइमा पर्न थालेको छ। सेलिब्रेटी हनिमुन मनाउन पुगेको स्थान होस् या साथीसँग छुट्टी मनाउन पुगेको कुनै समुन्द्री किनार ,यी स्थानलाई पछ्याउँदै विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि दिनानुदिन बढ्दो नै छ। आज हामी कुरा गर्दै छौँ सेलिब्रेटी स्पेसल डेस्टिनेसन अर्थात् इन्डोनेसियाको सुन्दर सहर बालीको बारेमा जहाँ प्रियङ्का कार्की , अदिति बुढाथोकी , नेहा कक्कड , आयुसमान देशराज जोशी ,रिमा विश्वकर्मा लगायत धेरै कलाकारहरू पुगेर सुन्दर तस्बिर कैद गर्न भ्याइसकेका छन्।
हाल बर्सेनि १५ हजारभन्दा बढी नेपालीहरू घुमफिरका लागी इन्डोनेसिया पुग्ने गर्दछन्। समुन्द्री सुन्दरतासँगै प्राकृतिक वातावरणको धनी इन्डोनेसियाको बालीमा के साधारण मानिस जान सक्छन् ? कति दिनको प्याकेजमा बाली घुम्न सकिन्छ ? बाली जान कसरी भिसा लिने , कति खर्चमा बाली पुग्न सकिन्छ ? यी सबैको उत्तर हामी यहाँ दिनेछौँ।
के छ इन्डोनेसियामा ?
इन्डोनेसिया घुम्न जाने जो कोहीको पहिलो रोजाइमा सुन्दर सहर बालीकै नाम अग्र पङ्क्तिमा आउँछ । वर्षौँदेखि यस सहरले विश्वका करोडौँ मानिसलाई लोभ्याइरहेको छ ।
दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक इण्डोनेशियामा बाली मात्र होइन, जैविक विविधताले भरिएका अरू धेरै बाली विश्वलाई नै मोहित तुल्याउने क्षमताका छन् । झन्डै १७ हजार साना–ठूला द्वीपले बनेको द्विपीय राष्ट्र इन्डोनेसियाका अद्भुत र अनौठा विशेषताले जो कोहीलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछ । भनिन्छ, मानिसले आजीवन इन्डोनेसिया का द्वीप घुमे पनि सबै विशेषता पत्ता लगाउन हम्मेहम्मे पर्दछ ।
हिन्द र प्रशान्त महासागरको बिचमा छरपस्ट यी द्वीपहरू देख्दै अचम्म लाग्दा छन् । कुनै ठुलो छ त कुनै समुद्रको बिचमा एउटा चुच्चे ढुङ्गो मात्र ठिङ्ग उभिएको छ । साना–ठूला जहाजहरू यी द्वीपलाई छलेर यताउता गर्दै हिँड्न बाध्य हुन्छन् । अलि ठूला द्वीपमा भने मानव बस्ती छ । लामो समय पोर्चुगल, बेलायत र फ्रान्सपछि पछिल्लो पटक करिब ३५० वर्ष डच (नेदरल्याण्ड्स)हरुको उपनिवेश रहेको इन्डोनेसियाका यी द्वीपमा बसोबास गर्ने मानिस पनि अनेक धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, ३०० भन्दा बढी जाति–जनजाति, आदिवासी र आर्थिक हैसियतमा बाँडिएका छन् । इन्डोनेसिया औपचारिक रूपमा सन् १९४९ मा डचबाट स्वतन्त्र भएको थियो ।
करिब २७ करोड जनसङ्ख्या रहेको इन्डोनेसियामा बहुसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायका मानिस छन् । यो विश्वकै मुस्लिम समुदाय सबैभन्दा बढी रहेको राष्ट्र हो । तैपनि यस मुलुकलाई ‘विविधतामा एकता’को सूत्रका रूपमा सबैले आत्मसात् गरेको पाइन्छ ।
इन्डोनेसियाका अन्य गन्तव्य
विश्व प्रसिद्ध पर्यटकीय नगर बालीझैँ पर्यटकको आकर्षण बोकेको अर्को क्षेत्र हो इन्डोनेसियाका सुदूर दक्षिणमा अवस्थित पूर्वी नुसा टेंगारा प्रान्तको फ्लोरेसस्थित लाबुअन बाजो द्वीप ।
इन्डोनेसियामै सबैभन्दा गरिबीको चपेटामा रहेको यस द्वीपमा सरकारले पछिल्लो समय पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाएको छ । उब्जनी खासै नहुने, जताततै स–साना पहाडी थुम्का देखिने र कतैकतै स–साना बस्ती देखिने यो ठाउँ प्राकृतिक रूपमा भने धनी छ ।
पानीजहाजबाट पनि यहाँ अन्यत्रबाट पर्यटकहरू आउने गरेका छन् । लाबुअन बाजोमा पर्यटकको सङ्ख्या बढेसँगै नयाँ–नयाँ सुविधा सम्पन्न होटेल, रेस्टुराँ र रिसोर्ट खुल्नुका साथै साना–ठुला डुङ्गा एवं क्रुज व्यवसाय निकै फस्टाउन थालेको छ । लाबुअन बाजोमा पर्यटक पथप्रदर्शकको कार्य गरिरहेका स्थानीयवासी रोड्रिगो गोन्जालेसले यहाँ हरेक वर्ष पर्यटक आगमन बढेसँगै स्थानीयवासीले राम्रो आयआर्जन गर्न थालेको बताए ।
पर्यटकहरूका लागि लाबुअन बाजोमा सामुद्रिक दृश्यावलोकन, सूर्योदय र अस्त, डुङ्गा सयर, सामुद्रिक तट(बिच)हरूमा विचरण तथा स्थानीयवासीको परम्परागत नृत्य सदैव नयाँ–नयाँ सम्भावनासहित हाजिर छन् । यतिले मात्र लाबुअन बाजो चिनिन्न ।
लाबुअन बाजोको मुख्य बन्दरगाहबाट करिब चार घण्टा क्रुजको यात्रा गरेर पुगिने विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत कोमोडो राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँको प्रमुख आकर्षक केन्द्र हो । यहाँ पादर द्वीप, पिन्क बिच, समुद्रभित्र डुबुल्की मारेर देखिने ‘कोरल रिफ’को अद्भुत दृश्य तथा कोमोडो ड्रागन (ठुलो गोहोरो) ले पर्यावरणमा अभिरुचि राख्ने हरेकलाई आनन्दित तुल्याउँछ ।
इन्डोनेसियाको पादर द्वीपको करिब ६०० सिँढी उक्लिएपछि देखिने पहाडले समुद्रलाई तीनतिर काटेको दृश्य र कोमोडो ड्रागनलाई इन्डोनेसियाको कागजी मुद्रा (रुपियाँ) मा समेत प्रिन्ट गरिएको छ । दुर्लभ कोमोडो ड्रागन सरिसृप प्रजातिको ठूलो गोहोरो हो । कोमोडो राष्ट्रिय निकुञ्जको आकर्षक यस जनावरले मानिससमेत निकुञ्जमा पाइने गाई, भैँसी, हरिण, बाँदरजस्ता साना–ठुला सबै किसिमका जनावरलाई सिकार गर्ने निकुञ्जका नेचर गाइडहरू बताउँछन् ।
दर्जनौँ नेपाली ट्राभल्स कम्पनीले पछिल्ला वर्षहरूमा इन्डोनेसियाको बाली, सिङ्गापुर, मलेसिया र थाइल्यान्डका लागि ‘टुर प्याकेजहरू बनाएर लैजाने गरेको पाइएको छ । नयाँ गन्तव्यको भ्रमणबाट व्यक्तिगत मनोरञ्जनका साथै पूर्वी एसियाका मुलुकले पछिल्लो समयमा गरेका प्रगतिबाट नेपालको समृद्धिका लागि धेरै सम्भावना पहिल्याउन सक्ने देखिन्छ ।
भिसा कसरी लिन सकिन्छ ?
हामी धेरैको समस्या र जिज्ञासा को पाटो हो भिसा प्रोसेस। तर खुसीको कुरा के छ भने इन्डोनेसिया जान भिसा लगाइरहनु पर्दैन। सिधै विमानस्थल गएर अन अराइभल भिसा लिन सकिन्छ र टिकट काटेर ढुक्कले बाली घुमेर फर्किन सकिन्छ।
कति दिनको प्याकेजमा जाने घुम्न ?
सामान्यतया बाली जाँदा ४ रात ५ दिनको छोटो समयको प्याकेज हुने गर्दछ। भने ३० दिनसम्म पर्यटकीय भिसा लिएर बालीमा घुम्न सकिन्छ। ४ रात ५ दिनका लागि प्रतिव्यक्ति ५५ देखि ६५ हजारसम्मको खर्चमा इन्डोनेसियाको बाली घुमेर आनन्द लिन सकिन्छ। त्यस्तै ९ रात १० दिनको प्याकेजमा लगभग बालीका प्राय हिस्साहरूको भ्रमण गर्न सकिन्छ।
बाली पुगेपछि घुम्नै पर्ने स्थानहरू :
१) पुरा तनाह लोट
कुटाबाट २० किलोमिटर दुरीमा रहेको यो मन्दिर बालिकै एक सुन्दर मन्दिर हो। बालिका मानिसहरूको लागी, यो सबै टापुको समुद्री मन्दिरहरूको सबैभन्दा पवित्रमध्ये एक हो। जहाँ पुगेपछि तपाईले सारा दु:ख कष्ट बिर्सनुहुनेछ।
२ ) माउन्ट बतुर
सूर्योदयको लागि एकदमै फेमस छ माउन्ट बतुर , जसलाई नियाल्न हजारौँ यात्रुको लर्को लाग्दछ। उबुदबाट एक घण्टाको दूरीमा रहेको यो पवित्र सक्रिय ज्वालामुखी बालीको केन्द्रीय हाइल्याण्ड्सको किन्तामनीमा अवस्थित छ।
३ ) उलुवातु मन्दिर
उलुवातु मन्दिर बालीकै उत्कृष्ट मन्दिर अन्तर्गत पर्दछ जहाँको क्लिफ सेटिंग अत्यन्तै राम्रो छ। यस स्थान सूर्यास्तका लागि ख्याति प्राप्त छ। कुटाबाट २५ किलोमिटर दुरीमा रहेको यस मन्दिरले बालीलाई कु – नजरबाट जोगाएको भन्ने पनि विश्वास गरिन्छ , त्यस समय बाँदरहरूले यहाँको सुरक्षा गरेको पाइन्छ।
४) उबुद मंकी फरेस्ट
उबुदबाट १० मिनेटको पैदल यात्रा गरेर मंकी फरेस्ट पुग्न सकिन्छ । यदि तपाई जनावर लाई नजिक बाट हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने र तस्बिर कैद गर्न मन पराउनु हुन्छ भने यो स्थान तपाइको लागि सबैभन्दा राम्रो ठाउँहरू मध्ये एक हो।
५ ) उबुदको कला र संस्कृति
कला र संस्कृतिको लागि पनि बाली एकदमै चर्चित छ। त्यसैले बाली पुगेपछि यहाँको कला संस्कृतिको अवलोकन गर्न नछुटाउनु होला।
६ ) टेगाललाङ्ग र जटिलुहि
यदि तपाई मठ मन्दिर र समुन्द्रबाहेक बालीको फरक सुन्दरता अर्थात् धान बारीको अवलोकन गर्न चाहनुहुन्छ भने टेगाललाङ्ग र जटिलुहि अर्को सुन्दर गन्तव्य बन्न सक्छ। उबुदबाट ३० मिनेटको ड्राइभमा टेगाललाङ्गको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ भने ९० मिनेट को यात्रा पश्चात् जटिलुहीमा पुगेर त्यहाँको हरियाली वातावरणलाई नियाल्न सकिन्छ।
७ ) नुसा दुवा बिच
बालीको सहरी वातावारणको घुमघाम पश्चात् घुम्ने नयाँ स्थान हो नुसा दुवा बिच। जहाँ सूर्यको ताप , चिसो पेय पदार्थ , मधुर सङ्गीत सुन्दै बिचको मजा लिन सकिन्छ। बालीमा भएका बिचमध्ये यो एक सुन्दर बिच हो। समुन्द्री किनार( बिच ) को मजा सँगै यहाँ भएका रिसोर्टमा तपैले स्पा को मजा समेत लिन सक्नुहुन्छ।
८ ) सेकेमपुल झरना
बालीको अर्को सुन्दर गन्तव्य हो सेकेमपुल झरना जुन उबुदबाट केवल ६५ किलोमिटरको दुरीमा अवस्थित छ। यस स्थानमा स्थानीयले विभिन्न चार्ज लिने हुँदा यहाँ जाँदा आफै ड्राइभ गरेर जानुभन्दा लोकल गाइड लिएर जाँदा सहज हुन्छ।
९ ) वाटर बम बाली
स्विमिङ गर्न र पानीका बिबिध खेलमा रुचाउने मानिसका लागि कुटामा रहेको वाटर बम बालीको अर्को महत्वपुर्ण गन्तव्य हो।
१० ) नुसा इज्ल्यान्ड्स
भिडभाड र व्यस्त जीवनशैलीबाट केही टाढा गएर आनन्द लिन खोज्ने व्यक्तिका लागि नुसा इज्ल्यान्ड्स एकदम राम्रो र उत्कृष्ट गन्तव्य हो। यहाँ ३ फरक टापुहरू केही दूरीमा अवस्थित छन्।
यीबाहेक अन्य धेरै स्थानहरू बालीमा अवस्थित छन्। जसमा समयअनुसार तपाइले बालीमा आफ्ना आफन्त तथा साथीभाइका लागि किनमेल गर्न सक्नुहुन्छ , त्यस्तै उलून दानु ब्रतन ,कुटा बिच ,साइड मेन भ्याली ,तीर्थ एम्पुल टेम्पल , बालीको स्विङ्ग ,गेट अफ हेभन टेम्पल लगायतका थुप्रै स्थानको भ्रमण गरेर मिठा र सुन्दर यादहरू कैद गर्न सक्नुहुनेछ। बाली कफीको लागि पनि उत्तिकै चर्चित स्थान हो।
( निएसिया होलिडेजका सञ्चालक अजय अर्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित )